Aneurysm chepfungwa midziyo chinhu pathological mamiriro dzinoratidzwa STRUCTURAL pakakuvara nhumbi kuti aumbe pamasvingo avo sezvo Extensions pahombodo. Kazhinji, mhaka chirwere ari vachiberekwa chirwere kana STRUCTURAL abnormality. Kashoma vakachengeta chiitiko chacho nokuda kunotevera kana atherosclerosis.
Panguva kutyora inogona iri dzakasiyana-siyana uropi vascular Network. Zvisinei, sezvo mutemo, ivo chiri panzvimbo yayo munzvimbo mudenderedzwa Willis.
Zvichienderana mhando kukura Munokudzwa uye arteriovenous ropa nyonganyonga.
Arteriovenous aneurysm cerebrovascular achimiririrwa coils akawedzera venous midziyo. Izvi rworudzi kutyora anokonzerwa pakagadzwa zvakananga kutaurirana pakati ropa tsinga, tsinga nenyere. Zvinozivikanwa kuti BP yakakwirira zvikuru kupfuura venous. Direct kutaurirana pakati midziyo kunotungamirira ejection ropa kubva tsinga kupinda tsinga, pavaigona kutora chikepe chaienda kuti uropi. Kana kusunungurwa ichi achabatsirwa kumusoro kumanikidzwa. Izvi zvinokonzera rokuwedzera venous rusvingo. Marudzi chepfungwa aneurysms. Zviratidzo inotungamirwa Extensions zvinosanganisira marwadzo akaipisisa, kufamba zvirwere uye aikanganiswa pfari. Somugumisiro kuwedzera kumanikidza mukati rokuwedzera uye rive dete masvingo vakaumba sacciform chiwedzerwa yakabvaruka. Izviwo, chinokonzera intracranial ropa, izvo kazhinji kunoguma murufu.
Arterial aneurysms ose chepfungwa midziyo kunoitika muna arteries uye zvingava kuroorwa kana kakawanda, zviduku chaizvo. Zvichienderana mhando kuyerera achabatsirwa dzakasiyana kuratidzwa kukanganisa. Asymptomatic nyonganyonga vangazivikanwa netsaona. Unruptured aneurysms akaratidza manzwiro compression pamusoro cranial tsinga uye pfungwa, chisingaperi nomusoro. Mukuwedzera, chirwere achabatsirwa kutyorwa kunhuwidza uye zvakaratidzwa, nezvipusha, kukanganisa pamusoro nehanya ganda uye zvaunoita chiso chako.
Extension pakakoromoka kunotungamirira pezviri kubuda ropa. Aneurysm atsamwira achiperekedzwa ropa, zvingadzokororwa. Zvinofanira kucherechedzwa kuti pakutanga nyaya Mungozi kunoitika gumi kusvika matatu muzana, uye panguva akadzokorora kwemasikati - rufu mwero kupfuura makumi manomwe kubva muzana.
Patinoita chirwere matanho inobatsira kana pane mashoko ose intracranial ropa (yechiitiko ake). Mune zvimwe zviitiko, pachishandiswa zviratidzo kumisa chaiyo zvokuongorora hazvibviri aneurysm. Kujekeswa nechirwere rinoitwa kushandisa angiography. A chirwere kudzidza uropi midziyo anoratidza pamberi rokuwedzera, ukuru hwaro uye nzvimbo. Sezvo vamwe (mamwe) zviyero inoshandiswa kombiyuta (CT) uye simba renyika rinonzi magnetic resonance (MR) kuri.
Cerebral aneurysms. Treatment.
Kusimbisa nechirwere dzidzo rokuwedzera vanoshandiswa chiratidzo nokuda mishonga kuvhiya kupindira. Mune zvimwe zviitiko, kuvhiya hakuratidzwi kusvikira nhambo apo aneurysm zvasvika munhu zvinouraya kushivirira hukuru. The oparesheni anogona kuitwa nenzira dzakasiyana-siyana. Mune dzimwe nguva, uyewo anoshanda inoti clamped uye akochonorwa nokudaro kubva mudziyo icho kuumbwa. Izvi anobvisa mukana atsamwira uye ropa. Mune imwe nyaya, nokubviswa mugove kukanganiswa rinoitwa uye vachiitsiva ane prosthetic kana hwokugadza anokosha puranga nokuti (stent).
"Branolind H": mirayiridzo kushandiswa, analogs, tsananguro, wongororo
Pfari - worudzii chirwere ndechokuti?
Kusagadzikana kana marwadzo pamakumbo: rakajairika zvinokonzera zvisingafadzi nezvekufadza
Laryngitis ari mwana: pakurapa dzakasiyana-siyana
Zvokuita aine mhoni pakutsva? Treatment zvinodhaka uye zvavo mishonga
Positive mifananidzo Vorobeva Evgeniya
Danho-mwanasikana Urganta uye navamwe hwake dzinodiwa Vakadzi
Japanese akatarisa Seiko: wongororo uye mapikicha
Sei hope wezviyo; dzakasiyana shanduro mabhuku hope
Nzeve marwadzo ari mwana - chii matanho kutora?
Nezvirahwe zvakasikwa uye unexplored incredible nyika yakatipoteredza
Zvaunofanira kuziva pamusoro sei kuti ndiwane mukadzi-Scorpio
Nokuchengetedza yakakurumbira zvakare uye zvakare sezvo search okuti "mhizha Zaporozhye"
Nzira yekuita sei zombie muMaincrafter pasina mods
Original sandwiches vane caviar
Zvikuru nevakawanda mutambo pakombiyuta. The mazita dzakakurumbira mitambo yacho pakombiyuta
Chikonzero chirungurira nemigumisiro. Sei kubvisa chirungurira?